Ndeupi mutengesi weApple anotengesa zvakanyanya uye ndiani anoutenga? | Ndinobva mac
Ndeupi mutengesi weApple anotengesa zvakanyanya uye ndiani anoutenga?
Ruzivo rwekudziya rwasvika kwatiri pakati penguva yekuchengetedza uye svondo rekutanga rekutengesa. Hatina zviyero zvekutengesa, asi isu tine mhedzisiro yehuwandu kune anoitenga, kana kuti, ndevapi vashandisi vari kuida. Nechizvarwa chekutanga cheApple Watch zvinhu zvaive zvakapatsanurwa, ese mamodheru uye mavara aive neakanaka kuchinjika. Gore rapera, 80% yekutenga yakatanga yaitwa nevarume uye ivo vanga vasiri chaizvo vateereri vechidiki uye vakasiyana. Zvino zvinhu zvachinja, kana zvirinani ivo vatanga kuchinja.
Tsvaga pazasi pehuwandu hwehuwandu hweApple Watch Series 2 uye ndeapi mamodheru ari akabudirira uye ari kudiwa. Isu tinoziva kuti ndeupi hukuru hunodiwa panguva ino uye ndeupi muto uri kubudirira mukuchengetedza uye kutanga kutenga. Ramba uchiverenga.
1 Iyo inodikanwa yeApple Watch 2
2 Apple Tarisa 2 demographic mhedzisiro
Iyo inodikanwa yeApple Watch 2
Tisati tataura nezve mhedzisiro yehuwandu uye rudzii rwevateereri rwunodhonzwa kune ino wachi, ngatione iyo inonyanya kudiwa modhi. Zvine musoro, ichiri iyo aluminium modhi, uye ndiyo yega ine mutengo unodhura, unodhura pakati pe400 ne500 euros. Iyo simbi isina waya inodarika ma600 euros uye izvo mudziyo wacho zvakafanana. Uye zvechokwadi ngatiregei kutaura nezveHermes kana iyo White Ceramic Edition. Icho hachisi chisarudzo chevashandisi vakaita seni. Zvakanaka, ingave iri aluminium kana simbi, ndeupi saizi inosarudzwa nevazhinji? Kwete, haisi iyo yakachipa pane maviri.
Dhongi hombe, famba kana kwete. Vashandisi vakumbira iyo 42mm modhi. Y ndeyekuti zvakafanana zvakaitika neiyo iPhone 7 plus. Vashandisi vanosarudza kusarudza saizi hombe, kungave nekuda kwekunakirwa kuri pa iPhone iyo yainofungidzira kana kuona iyo skrini zviri nani uye nekugona kuishandisa zviri nyore kwazvo mune iyo wachi. Musiyano uripo pakati pe38 ne42mm hausi mukuru, asi zvinoratidza. Pandaive nepfungwa mupfungwa dzekuwana iyo Apple Watch, pakutanga ini ndanga ndichienda kune mudiki, asi ndinofanira kubvuma kuti ini ndinoda hombe iri nani. Zvinoita kunge zvinotaridzika zviri nani uye zvinoita kunge zvakawedzera.
Anenge makumi manomwe muzana ezvisungo zvakagadzirwa nesilicone, kungave nekuda kwechitarisiko chavo chakajeka uye zvakapusa uye kunyaradzwa kwavo kana nekuti iwo ari asingadhuri. Uye vashandisi vanofarira rudzii? Vatema. Chaizvoizvo, iyo iPhone 70 inodzokororwa zvakare.Iye zvinoita sekuti hatichasarudze mavara akareruka pane Apple zvishandiso, asi kune erima iwo.
Apple Tarisa 2 demographic mhedzisiro
Sezvandambotaura pakutanga kwechinyorwa, gore rakapera ndaive mukundi pakati pevarume. Pane ino chiitiko ivo vanomiririra yakajeka yakajeka, asi iyo chikamu chevakadzi vanoichengetera uye vanozvitenga mumazuva ayo ekutanga zviri kukura. Gore rakapera vaimiririra chete 20% yekutengesa, gore rino ivo vane 26%. Haisi yakawanda, asi chimwe chinhu. Uye zvakare, imwe yeinonakidza dhata yemhedzisiro iyo AppleInsider yakaratidza ndeyekuti ichi chizvarwa chechipiri chiri kuwanikwa nevadiki vateereri. Iyo itsva Apple Watch inosvika zviuru zvemamirioni, ndiko kuti, kune vechidiki.
Izvo zvinoyevedza nekuti ivo vashandisi vasingawanzo kuve nesimba rakakwira rekutenga, kunyanya munyika medu. Iyo Apple Watch Series 2 ndeye elitist chigadzirwa uye chakanangana neyakafuma chikamu. Uye icho chishuwo chinogona kupihwa zvachose nacho. Chikonzero chete chekutenga ndeyekuti uri kunyatso kushandisa ese mamirita ehutano aunotakura uye kuishandisa kuekisesaiza zvechokwadi. Zvichiri kudhura zvakanyanya pane zvazvinoita. Kune zvimwe zvimwe zvinodhura zvingasarudzwa pamusika, kunyange izvo zvisina App Store kana kuwiriranisa kwakakwana neIOS.
Sezvandinotaura, € 450 paavhareji ye wachi ine mabasa aya yakawandisa. Mutengo wakakodzera chingave chinhu chiri padhuze nezvinodiwa neChitsauko 1, ndiko kuti, pakati pee330 ne € 400 zvakanyanya. Iwe unofungei nezvemhedzisiro yekutengesa uye mamodheru aunofarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ndeupi mutengesi weApple anotengesa zvakanyanya uye ndiani anoutenga?
Gunyana 2016 ndiwo mwedzi wakasarudzwa neApple kumira kutsigira OS X Mavericks
Zvinyorwa zveMacOS Sierra zvinounza maficha matsva